04 November, 2019 in Maqaallo by BANA Mogdishu Office
Caqabada ugu weyn ee haysata Dowladda Fedaralka Somalia.waa saraakiil si qarsoodiya ula shaqeeya kooxaha Argagaxisada kuwaasi oo ku milmay Hay'adaha amniga waana halis ka daran kuwa muuqda ee lala dagaalamaya sidaas waxaa lagu daabacay wargeyska
Caqabada ugu weyn ee haysata Dowladda Fedaralka Somalia.waa saraakiil si qarsoodiya ula shaqeeya kooxaha Argagaxisada kuwaasi oo ku milmay Hay'adaha amniga waana halis ka daran kuwa muuqda ee lala dagaalamaya sidaas waxaa lagu daabacay wargeyska The Voice of the People Rooble Dheere waxaa uu kamid yahay Saraakisha Booliska ee sida dhow ula shaqeeya Al-Shabaab uguna dhex jira Hay'adaha amniga.
Sarkaalkan magaciisa lagu soo koobay Rooble Dheere waxaa uu Wargeysku sheegay in Argagaxisada Al shabaab u qaabilsan yahay sii deynta Maleeshiyaadka loogu xiro xarunta denbi baarista Booliska CID isaga oo lacago laalusha siiya Saraakisha ka shaqeeya xaruntaasi kadibna ka sii daaya Ragga Argagaxisada katirsan ee lagu soo qabto howlgalada ka dhaca Magaalada Muqdisho.
Rooble Dheere waxaa uu Wargeysku sheegay in gabadhii isku qarxisay xarunta Gobalka Banaadir Basiira Cabdi Maxamed balse magaceeda dhabta ah uu yahay Maryam Cabdiraxmaan Muxumad Abiikar, noqday shaqsigii ugu wacitaanka badnaa ee lagu helay baarista maalinta ugu danbeysayna ku soo qaaday gaari nuuciisu yahay Sarive oo uu leeyahay.
Sarkaalkaan katirsan Booliska Somalia. ayaa sidoo kale Wargeysku sheegay in tiro 3 jeer kabadan Bishii safaro uu ku tago dhulka ay maamulaan Al shabaab qaraabo dhowna uu la yahay Taliyaha qeybta Booliska Gobalka Banaadir Saadaq Joon.
Xigasho Wargeyska The Voice of the People
Shabaab oo shaaciyay iney Muqdisho ku dileen labo sarkaal
XILDHIBAANKII ISKU BEDELEY ISTAAFKA
Milkiilaha Amiin Ambulance oo ay Booliisku la Baxeen
Xabad joojin la kala dhex-dhigay maleeshiyaad ku dagaalamay G/Mudug
Qarax dhimasho & dhaawac geystay oo goor dhow ka dhacay Muqdisho & Sarkaal.
Madaxweynaha iyo madaxweynaha ku xigeenka Puntland oo isku khilaafay sarkaal ciiddan oo xilka laga qaaday
Guddoomiyeyaal cusub oo loo magacaabay Maxkamada G/Banaadir iyo tan Racfaanka
Uhuru Kenyatta oo isku shaandheeyey golihiisa Wasiirada
Somalia Lost a Career Diplomat, Veteran Politician, Prolific Writer and Pan-Somalist Visits: 39512
Gurigii SHariif Hassan Baydhabo oo Lala Wareegey Iyo Bililiqo ka dhacdey Visits: 673
Dr Maxamed Cali Guyo. ayaa lagu eedayay in uu la xirtay Maamulka Farmaajo Visits: 653
Qoor Qoor oo kulan Albaabada u xiran yahay la qaatay Cumar Filish Visits: 1071